Posted by Tranquillus | Oct 4, 2018 | Tababarka internetka
Maxicours: tixraaca lagama maarmaanka u ah umeerinta internetka ee ardayda CP-ga ee Terminale
Maxicours.com waa barnaamijka ugu fiican ee caruurtaada iyo naftaada haddii aad timaado inaad ka shaqeyso Faransiiska. Waxaa ka mid ah tababare dugsi oo tayo leh iyo sidoo kale ilo waxbarasho oo badan oo isdhexgalka ah.
Daryeelka ardayda waxay ka socdaan koorsada diyaargarowga ilaa sannadka ugu dambeeya ee dugsiga sare. Dhammaan ardayda leh dhibaatooyin tacliineed oo raba inay ka faaiidaystaan ​​taageerada waxbarashada masaafada ayaa loo ballan qaadayaa inay xoojiyaan aqoontooda. Waxay ka faa'iideysan doonaan caawimaad dugsi maalinle ah si ay u kobciyaan keligood, guriga.
Sidee Maxquors u shaqeysaa?
Maxicours waa barmaamijka taageerada waxbarashada ee internetka ee ka tirsan kooxda Educlever. Magacani wuxuu horeyba kuu sheegi karaa wax. Runtii waa mid ka mid ah hogaamiyaasha waxbarashada ee Faransiiska. Iyadoo loo marayo mareegta, ardayda ku jirta nusqaamo mid ama in ka badan ayaa leh qalab kala duwan si ay u kobciyaan aqoontooda.
Maxicours.com waxaa ku jira waxyaabo wax lagu barto iyo jimicsi wax-qabad ah oo dhammaan noocyada kala duwan si loo fududeeyo barashada. Fasallada taageerada dugsiga waxaa bixiya macalimiin khaas ah. Waxay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan su'aalaha ardayda maalin kasta ee usbuuca. Himilada goobta ayaa ah inaad ka caawiso caruurtaada inay ku guuleystaan ​​waxbarashadooda. Kordhinta heerka darajadooda ayaa ah mudnaanta macallimiin khibrad leh oo mas'uul ka ah umeerinta.
Qodobada waxbarashada ee ay ansaxisay Dawladda
Iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in Maxicours ay soo jiidato koorsooyinkeeda intarneedka ah ee bangiga khayraadka ee Wasaaradda Waxbarashada, tayada faa'idoyinkeeda ma aha in la xaqiijiyo berrinka. Wadashaqeyntu waxay la socotaa wasaarada sidoo kale waa caddeyn aan la aqbali karin oo ku saabsan halista ah Maxicours.com.
READ Maalgelinta tababarkaaga xirfadeed, hage wax ku ool ah
Intaa waxaa dheer, waa in la ogaadaa in qandaraas kasta uu si aan xadidnayn u helin e-ansixinta internetka Universalis. Sidaa darteed waxay noqon kartaa fursad aad u wanaagsan ilmahaaga si uu u ballaariyo aqoontiisa maado kasta oo leh qaab jimicsi, iyo xajintiisa.
Muxuu bixiyaa waxbarashada umeerinta internetka ee Maxicours.com?
Qiimaha lagu soo bandhigay bogga soo bandhigida rukunka waa mid soo jiidasho leh, maaddaama ay kala duwan yihiin 16 € 60 € ilaa 29 € 90 oo keliya. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la dego fursadaha ku jira qaybaha kala duwan ee Maxicours. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho waxbarashada masaafada ugu habboon ilmahaaga.
Taageerada waxbarashada aasaasiga ah ee casharrada guriga
Waxbarid iyadoo la kaashanayo macalinka khadka tooska ah waa la heli karaa habeen kasta, xitaa Axadaha. Ikhtiyaarkan ayaa si gaar ah ugu habboon ardayda raadinaya macallimiin aqoon leh oo ka caawiya shaqada guriga. Waxay sidaas ku heli doonaan jawaabo degdeg ah su'aalahooda.
Taageerada gaarka ah ee ay bixiso Maxicours waxay ahaan kartaa mid gebi ahaan fog, laakiin wali waa hab weyn oo lagu xoojiyo fursadaha guusha waxbarashada ee ilmahaaga, gaar ahaan sanadka kowaad ee rakibiddaada. Wuxuu helayaa fursad kasta oo uu ku heli karo calaamado fiican dugsiga.
Taageero ardayda ka socota CP ilaa Terminale
Maxicours waxay bixisaa mid ka mid ah dalabyada ugu dhameystiran ee ku saabsan taageerada dugsiga ee guriga. Laga bilaabo CP-ilaa Terminal, arday kastaa wuxuu heli karaa qoraallada, fiidiyowga, iyo su'aalaha ku saabsan fasallada hoose iyo sare ee aan xadidnayn. Sidaas awgeed waa habboon kuwa kuwa u baahan baahidooda, ilmaha sida dadka waaweyn. Ardayda wanaagsan ee raba inay ka soo baxaan jadwalka iskuulkooda waxay sidoo kale ku faraxsan yihiin. Runtii, waxay haystaan ​​fursad ay ku eegaan casharrada sanadka soo socda.
Guud ahaan, waa qalabka 35 ee ka soo horjeeda koorsooyinka 152 000 iyo layliyo. Dhammaantood waa la aqoonsan yahay si waafaqsan barnaamijyada waxbarashada qaranka waxaana sameeya macalimiin shahaado haysta. Koorsooyin Luqadeed, Xisaab, SVT, Physics-Chemistry ama Taariikhda Juquraafi ... Mowduuc ma lumin.
Ujeedo shahaadada qalin-jabinta adoo adeegsanaya umeerin internet ah
Muuqaalka Maxquours waxaa si gaar ah loogu talinayaa ardayda waa in ay ku aflaxaan dibloomada dhammaadka sanadka. Xaaladda Brevet des iyo Bac, dib-u-habeyn dib-u-habeyn ah iyo sannadle ah ayaa la siiyaa si loogu dhiirrigeliyo ardayda inay bartilmaameed u noqdaan inta lagu jiro diyaarinta imtixaanada.
Isbarbardhiga qiimaha aan la daboolin ee ay bixiyaan goobta ay ku jiraan umeerinta fasalka, waxaan dhihi karnaa annagoo aan wax badan ka sheegeyno in tani ay tahay dhaqaale aad u xiiso badan. Gaar ahaan tan macaamiish kasta waxaa lagu wadaagi karaa isla qoys, ilaa caruurta 5. Maxaa xajiya dhibaatooyinka dugsiga ee dhammaan walaalaha ah ee ka dhan ah qadar yar.
Waa kuwee rukunka aad ku dooraneyso Maxicours.com?
Muddooyinka rukumada kala duwan ayaa la heli karaa iyada oo loo eegayo ujeedooyinka mid kasta. Sidaa darteed, dib u habeyn sahlan, koorso xoogan semester ayaa u muuqata mid ku haboon. Si kastaba ha ahaatee, diyaarinta imtixaanka, si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa mid macquul ah in la doorto qandaraas-sannadeedka sannadka kaasoo keydin doona dhowr euro oo dheeraad ah qiimaha sannadka ee xirmada.
Isku day wax-barashada internetka ee Maxicours iyada oo damaanad qaad "guusha ama dib loo soo celiyo" dhammaan liisaska.
Maxicours.com waxay si sharaf leh u muujineysaa heerka qanacsanaanta gaar ahaan sare ee 97% bogagga qaarkood ee goobta. Si lagaa dhaadhiciyo inaad tijaabiso barnaamijkooda, dammaanad "qanacsanaan ama soo celin" ayaa xitaa laguugu deeqayaa bishaada koowaad ee tijaabada iyo xaalado gaar ah oo dhaafsan Sidaa darteed fursad weyn ayey kuu tahay adiga inaad tijaabiso oo aad soo ogaato adeegga taageerada ee Maxicours iyo inaad fikrad ka hesho naftaada.
Ma rabtaa inaad tijaabiso Maxicours? Markaad intaas tidhi, 200% kuma qanacsanid in barnaamijkani ku habboonaan doono carruurtaada inuu ka fiicnaado umeerin caadi ah? Naso, waxaad qaadan doontaa (ugu dhawaan) khatar la'aan.
Xaqiiqdii, haddii xitaa shaqo joogta ah ilmahaagu ma helayo dibloomiisa halkaasoo uu kuugu soo laabanayo si aad dib ugu soo celiso. Sidaa darteed ha ka baqin oo sanad dugsiyeed abaalmarin ah u soo bandhig ilmahaaga si aad u hesho lacag.
Maxicours: tixraaca bixinta umeerinta internetka raqiis ah Sebtembar 27th, 2018Tranquillus
horeDiscovery of Cordial Pro Orthographic Rising Software.
socdaSidee loo Nadiifiyaa Macluumaadkaaga Twitter-ka iyo ilaalinta Sawirkaaga?